Ukuze uxhume izingxenye zensimbi imishini, izindlela, izakhiwo kanye nezinhlaka amadivayisi zezakhiwo ngaphandle hardware eyengeziwe obandayo esetshenziswa Welding kagesi. Umsebenzi wokwakha metal izakhiwo welders enze Welding mathupha. On ezingeni lokusebenza amakhono izinga uxhumano incike imikhiqizo emisha kanye enifeza ukulungiswa.
Ukungalungi noma ukunganaki izibophezele emsebenzini wabo, kuholele ukwehluleka kwanoma izakhiwo, izingozi ezinkulu. Kuvele ingcweti uyaqonda imininingwane Welding, uyazi okushiwo inqubo, isebenzisa amasu amasha amasu eziyinkimbinkimbi. UWelder Electric of inhlukano Welding umsebenzi izinjongo zokuphatha, lapho ungeke ukwazi ukusebenzisa imishini ekwazi ukuzilawula.
I Welding evele ezimbili metal Incibilikile esebenzisa arc kagesi ungqimba engenhla, okuyinto angena impahla electrode. Ngemva lwaluyophola kwakhiwa metallic umphetho okuhlala. amasevisi UWelder kagesi ziyadingeka cishe kuwo wonke inhlangano noma ibhizinisi.
Izimfanelo namakhono kagesi UWelder
Okukhethekile zokushisela kuyinto enzima futhi onobungozi, ngakho i-umsebenzi ngihlolwa sabantu labetibambile kohlaka olusungulelwe ukuthola izinkinga zezempilo. Umfakisicelo isikhundla uyaqonda ukuthi lena umkhakha onzima. Oshiselelayo Welding ibhukwana lencazelo izici ezilandelayo:
ukuphikelela nokukhuthala ephumelelisa imigomo;
Kuyinto eziqinile nasengqondweni nangokomzimba;
ngesineke azikhuthazelela eside bahlale izikhundla ungakhululekile, futhi izikhala okuvalelwe;
Kuyinto ngokwemvelo noma ukuthuthukisa okuqonda sibonwa, umbono, bakwazi ukunquma ubukhulu iso;
akwazi ngobuciko nangokunembile ukuhambisa;
ngaphandle kokwesaba yokusebenza ezindaweni eziphakeme;
umsebenzi wenziwa kahle futhi ngokunembile.
Izimo ubuchwepheshe yilezi: yezifo nohlaka lwamathambo, ukuxakeka rheumatism, izifo zemigudu yokuphefumula, komzimba nezinto, kukhuphuke blood pressure, angaboni kahle, ukungabi ukunyakaza futhi eliqhaqhazelayo yezingalo nemilenze.
Amathuluzi nezinsiza Uchwepheshe
A elula futhi high quality electrode umnikazi (zihlukaniswa kalula - 0.5 kg).
The Mask ekhanda noma isihlangu Welding ukuvikela amehlo futhi ubuso kusukela infrared.
Izintambo ukuxhuma umshini umthombo zamanje kagesi kanye ukwakha arc zokusebenza.
Welders Welding Imanuwali ebusweni metal yokuhlanza emabhulashini esetshenziswa.
Hammer nge Isikhala umphetho ka slag.
Isixhokolo ukususa ukungapheleli.
Line, sikwele, telunyawo, iqoqo izifanekiso.
izingubo Welding Special.
Ngo umsebenzi Welding, kukhona inqubo thuthuva ezithile kuholele okuvela ukusonteka ekucindezelekeni kusukela abonobangela abahlukeneko. Uthuthukisa ukusonteka umphetho ngokwengxenye Ukushisa Lesisemkhatsini, ukuncipha yayo, okungafanele ushintsho Weldable ingxenye isakhiwo, nokuningi. Manual UWelder kagesi zokushisela inhlukano kuhilela ukusetshenziswa emsebenzini wokukhiqiza umsebenzi wokwakha, okwasetshenziswa kakhulu wabonisa isixazululo eyakhayo we Welding iyunithi.
Ukuze ulwe inqubo iziyaluyalu osebenza ngokulingene ukusonteka indlela, eqinile eqinile yasibamba izingxenye, a annealing wokulungiselela, izinguquko lokushisa umkhiqizo emva kokuphothulwa Welding. Ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, kukhona ukukhubazeka zangaphakathi nezangaphandle uqhekeke, weld geometry ukuhlukumeza, ezimbotsheni phezu, liyehlisa.
Zonke ukwephula ubuqotho weld kuthinte izinga compounds umkhiqizo, kakhulu UWelder onekhono uzama ukugwema ukuhlukumeza ubuchwepheshe. ukwephulwa Uvele ngempela ukulungiswa. Ezinye ukukhubazeka uqondiswa ngaphandle ukusika umphetho, kwezinye okuphindaphindiwe weld emva ukususwa mechanical uxhumano kuhlulekile.
Ngo Welding inhlukano uyala UWelder kagesi kuhlanganisa ngokucophelela control ikhwalithi umphetho yokuxhuma, nebubi ezithile ngokucabangela tolerances avunyelwe ngokuhambisana nemithetho. Ngezinye amazinga ukubekezelelana iphutha UWelder elungisa umsebenzi eliphansi.
Osh inhlukano UWelder kagesi zokushisela imanuwali
Oshiselelayo iqala ukuhlola isimo zokusebenza iyunithi, kagesi ukunikezela ikhebula ukwahlukanisa kanye nesimo umnikazi electrode. Ubungcono esilandelayo isikhala ukusebenzela ngokuziphatha umsebenzi futhi silalele iziqondiso zokuphepha emsebenzini.
Ngaphambi ukusebenza umshini Welding lihlolwe earthing ayisivikelo iyunithi izindlu kanye yesibili emazombezombe we motor, ngaphandle kwalo ngeke uqale umsebenzi. Oshiselelayo arc inhlukano Welding isisekelo ebusweni umsebenzi ngesimo itafula metal. Ukuvikela UWelder amasethi Ukuvikela zendawo yokugcina impahla non-ezivuthayo.
Sebenza UWelder kagesi arc inhlukano Welding kuhilela ingozi umuntu abanjwe ugesi, ngakho Welding e manzi, izindawo ezimanzi kanti ku metal evele ngempela owenziwe ngenkathi emi phezu mat iraba ngaphansi kwezinyawo. Qiniseka ukuthi ukugqoka izicathulo zenjoloba (ngigqoke, amabhuzu), amagilavu ukusetshenziswa kuyo izihlahla zenjoloba. Amehlo ukuvikela amagogolo le UWelder noma buso ekhethekile.
Okuxhunyanwa ugesi wesifunda akuyona isikhathi eside kunaleso 10 m. Sebenza endaweni nge izinto ezingase zibambe umlilo ekhiqizwa ngokuhambisana imiyalelo ye-izimo ethile zokushisela. Ukulungisa izinto ezingase zibambe umlilo izitsha ukwenza ezindaweni zawo ngemva wokuhlanza ngokugeza ngamanzi afudumele.
Ukusebenza zikagesi ahlelwe ukuze ningathinti sufaka amapayipi eshubile. Musa ukuqhuba Welding ipayipi izindonga okuyizinto amanzi ohlelweni ingcindezi, igesi, uwoyela, nabanye. Ukuphazamisa umsebenzi kwenziwa ngemuva kokucima idivayisi kusukela ukunikezela ukususwa voltage kusukela electrode umnikazi.
Oshiselelayo Welding inhlukano kuvunyelwe ukusebenza, uma unalo isikhundla ziqu hhayi incane kuneyesibili. Umsebenzi ngaphakathi amathangi avaliwe, nezikhamo nezinye iziqukathi kuphela pair, umsebenzi uqala ngemuva kokuthola zemvelo noma mechanical ukupholisa ukufaka emsebenzini.
UWelder ovaloli ilungile futhi ngefomu efanele. Indaba elicinene Indwangu uhlobo engangenwa umlilo obukhulu, okungadingi ancibilike kusuka Sparks - tarp ekahle. hat Warm akhethiwe ngaphandle visor, okuyinto evimbela ukubekwa lesifanele imaskhi ukusebenza. Shoes igqoke nge ihhashi abayizimpumputhe, ekuvimbeleni ukushiswa izinhlansi it is kushintshwe ngobukhulu futhi uvalwe lizwakalise. Canvas amagilavu ezigugile ukuze emikhonweni sifihle jacket.
Non-mkhosi kuholela ezihlukahlukene ukulimala siqu:
electric shock obuhlukahlukene degrees;
Ubuthi zinc umusi, i-silicon, okuhola manganese, nitrogen;
ukulimala kuhlasimulise kusukela ukuqhuma;
ngemisebe ye-gamma izinhlayiya ngesikhathi welds raying.
Oshiselelayo arc inhlukano Welding liyadingeka ukuhambisana nemithetho umlilo. Yena kungaqali kuze emsebenzini akuyona waqinisekisa zokucisha abezindaba: amabhokisi isihlabathi, lokwela, ibhakede kanye mlilo.
Emsebenzini noma eduze naso ungagcini izinto eziqhumayo kanye oluvuthayo, izinto ezingase zibambe umlilo, izakhiwo lokhuni ngempela ukuvikela amashidi metal noma asbestos. Ngemva kokuphothulwa umsebenzi ukuhlola izinsalela ilangabi ovulekile futhi ungashiyi maphakathi ilangabi.
Job Description for the UWelder
A UWelder onekhono ingena esigabeni Professional. Kuqashwa abasebenzi kule nkampani nokuxoshwa we kwenhloko yomnyango wenziwa sivumelwano nomphathi ngokushesha. Lawa ngamakhono ayisisekelo, amalungelo kanye nezibopho ze-UWelder, ebekwe imfundo uchwepheshe umsebenzi.
Ukuze ikhono UWelder has amakhono athile futhi onolwazi. MMA welders ukwazi:
izakhiwo titanium Alloys, ezihlukahlukene zabo nezindawo ngokomzimba;
kudivayisi kinematic othomathikhi bese semi-automatic imishini Welding, ulwazi olujwayelekile mayelana electronic control ukugxusha;
idatha ku ukuchayeka ukugqwala we ngezinto ezihlukahlukene nezimbangela zayo;
ukuhlola izindlela imikhiqizo ngomumo okuphekiwe;
izinhlobo zokwelapha lokushisa ezivuzayo nezihlanganiso;
uhlaka jikelele ngoba metallography ngokuhlanganyela.
Job Description: UWelder kagesi zokushisela inhlukano ichaza yemfanelo, ngaphakathi kohlaka okuyinto umsebenzi UWelder sika. lisebenza Specialist basebenze ezindaweni ezahlukene.
Nokobana igesi, arc futhi plasma Welding oyinkimbinkimbi kakhulu hardware amayunithi, izingxenye kanye piping yezingxenye isakhi steel esetshenziswa, metal ayoni, waphonsa yensimbi. Isebenza ne Alloys ukuze isetshenziswe izakhiwo ashukumisayo futhi vibratory ne-high blood pressure.
Kuhaya igesi futhi arc Welding ashukumisayo ukwakhiwa ukusebenza kanye nezinye izakhiwo. Kusebenza Welding okuzenzakalelayo yokuxhuma izingxenye eyenziwe elixutshiwe titanium Alloys amadivayisi eziyinkimbinkimbi yesimanje. Ukhicita ngomshini Welding emabandleni amapayipi, ukwakha uxhumano, abasebenza ngaphansi vibration. Kuhaya Welding ophahleni ezivuzayo nezihlanganiso ebodeni mpo.
Amalungelo kagesi UWelder zokushisela imanuwali
ibhizinisi ngasinye, ngokuhambisana nemithetho, kuyomelwe ezithile UWelder amalungelo Welding manual, omsebenzi wakhe ephambana nezinye izingcweti. abasebenzi Ongaphansi ukuthola oda kusuka kuye ezindabeni ngaphansi kwalokho enekhono lakho.
Uchwepheshe lengamela ukugcwaliseka imisebenzi inqubo, uqaphe eside ukugcwalisa oda abangaphansi kwakhe. Oshiselelayo likwazi ukufinyelela wonke amarekhodi ezidingekayo, amadokhumenti ngenkambo zomsebenzi wabo futhi umsebenzi amayunithi okhonzile. Isisebenzi obhekene nokuxhumana ngamasevisi Logistics neminyango yokukhiqiza of the ibhizinisi.
Unegunya ukuba bahlole oda kanye nezinqumo yabaphathi bezinkampani imisebenzi yabo. It inikeza izindlela ezintsha yokuthuthukisa amasu Welding, ituse abathile ukuba amasevisi abanekhono. Ngokusho imiphumela umsebenzi owawenziwa sihlinzekela kokucubungula inhloko uhlu abasebenzi abaye ayevelele ngokwabo emsebenzini, futhi ucela ukuba sicabangele isijeziso izaphula-mthetho. It inhloko yazo zonke engahlelelwe izinguquko ubuchwepheshe kanye nokushiyeka abasafufusa libika ngokuqondile.
Oshiselelayo ngaphakathi komthetho unesibopho okulandelayo:
yekhwalithi ephansi ukubulawa umsebenzi noma ukwehluleka ukuhambisana nalo imisebenzi, ukwephulwa kwemithetho yangaphakathi inkampani;
ukwephulwa Ngokomthetho wawushilo, komthetho we-civil kanye nezokuphatha lobugebengu;
abangela umonakalo impahla kuhlelo;
ukwephulwa of izimfihlo zokuhweba kanye namalungelo ubumfihlo ibhizinisi;
ukwehluleka ukuhambisana kwezinkambiso imithetho ukuphepha emsebenzini kanye nezempilo.
Oshiselelayo lwesithathu inhlukano uketshezi Electric
Uchwepheshe wenza ibhukwana plasma arc Welding, umphetho kwenza eyinkimbinkimbi isilinganiso yesifunda carbon futhi kwesakhiwo lezinsimbi, izinto zokusetshenziswa non-ayoni. Isebenza nganoma iyiphi isikhundla kwakwakhe akhethiwe, ngaphezu ophahleni. Kwenza ilangabi ahlabayo izingxenye eyinkimbinkimbi isilinganiso lezinsimbi elixutshiwe nensimbi ne-carbon ongaphakeme izinsimbi ayoni. Fusing ingxenye bakhathale ithuluzi ovela ngensimbi ne-carbon.
Ulwazi namakhono kutholakale izinga UWelder kagesi zokushisela mathupha. Uchwepheshe kahle idivayisi kanye imishini kagesi Welding emakamelweni imishini Welding owazi izimfuneko izinga weld kanye ebusweni workpiece emva ukusika. Bakwazi ukuhlukanisa izakhiwo electrode ohlobo ezahlukene, ukwazi izindlela sokunquma izinga uxhumano umphetho. Isisebenzi ababeyizazi izimbangela okuvela yangaphakathi isakhiwo ukucindezeleka futhi lubasize.
Oshiselelayo 4th inhlukano uketshezi Electric
isisebenzi 4th wenza osenyameni plasma Welding izingxenye, izakhiwo, piping kusho yinkimbinkimbi yensimbi, Alloys non-ayoni, metal carbonaceous zonke izikhundla, okufaka ophahleni umphetho indawo. Kwenza ahlabayo cast iron, izinsimbi nonferrous, lezinsimbi ekhethekile, okusezingeni eliphezulu carbon Alloys. Imbondela ukwazi amapayipi evuthayo futhi amathangi, aqhephukile izingxenye zemishini, amayunithi namathuluzi. Owayeyisazi imidwebo eziyinkimbinkimbi.
Uyazi isimiso wesifunda electrofusion su, izici apharathasi AC futhi DC Welding ubuchwepheshe amagumbi izisekelo kagesi, izakhiwo mechanical izinsimbi.
Oshiselelayo 5th inhlukano uketshezi Electric
Ukhicita inhlukano-plasma arc Welding futhi wemishini eyinkimbinkimbi, izakhiwo kanye piping yesifunda kusukela emabangeni ahlukahlukene steel, is ungeniswe uxhumano yokwakha izakhiwo, abasebenza ezimweni ezinzima. Job Description: UWelder kagesi mathupha Welding 5 idijithi ibonisa ukuthi onguchwepheshe yenza izakhiwo Welding block nganoma iyiphi isikhundla umphetho. Kwenza ukulungiswa izici by fusing izingxenye eziyinkimbinkimbi izingxenye ezingekho. Oshiselelayo ofunda imidwebo eziyinkimbinkimbi izakhiwo kwezendawo metal.
Oshiselelayo 6th inhlukano uketshezi Electric
Oshiselelayo ngokukhethekile ngokuhlangana amayunithi eziyinkimbinkimbi futhi yesiguli, amathuluzi okuxilonga ipayipi imigqa anoma yiluphi uhlobo ngensimbi noma ingxubevange, uvunyelwe ukwakha ashukumisayo cores izakhiwo nezobuchwepheshe vibration izakhiwo. Weld ezivuzayo ku izakhiwo yokulinga lensimbi weldability abampofu, titanium futhi Alloys yayo. Uyazi wesifunda imishini yokusebenza design.
Isebenzisa ulwazi izakhiwo mechanical izinsimbi, izinhlobo umonakalo kusuka ukugqwala, izimbangela zazo. Kusebenza e Umkhuba umphetho elisekela metallography nokwelashwa lokushisa compounds.
Ekuphetheni, kufanele kuphawulwe ukuthi umsebenzi we UWelder liyinkimbinkimbi, ithinta umsebenzi wokwakha ngaphandle izingozi kanye iloli. Lo chwepheshe has impilo enhle futhi uvunyelwe ukusebenza ngemuva kokuphumelela nezindinganiso ezithile.
Ngubani uchwepheshe-Unicode? Job Description Technician Unicode
Wesistimu - ubani lo? Exchange System Administrator
Uyini-Easter, futhi kanjani it kugujwa emahlelweni ahlukene
Zonke izinhlobo zemisipha: hluza isithombe